ट्रान्ससिप मोडल विशाखापट्टनमबाट
काठमाडौं, २५ साउन । भारतको विशाखापट्टनमबाट वीरगञ्जसम्म हुने आयात निर्यातमा ट्रान्ससिप मोडल लागू गरिने भएको छ । यसका लागि दुई मुलुकबीच समझदारी भएको सैंजूले बताए । ट्रान्ससिप मोडल लागू भएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल
काठमाडौं, २४ साउन । प्रधानसेनापतिबाट अवकाश प्राप्त गर्नु एक महिना अगावै बिदा बस्ने नेपाली सेनाको प्रचलित परम्पराअनुसार प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले बिहीबार जंगी अड्डामा आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानसेनापतिको कार्यभार बलाधिकृत
उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन उपलब्ध साधन श्रोतको अधिकतम् उपयोग : मुख्यमन्त्री पोखरेल
रुपन्देही, २४ साउन । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रदेशमा उपलब्ध साधन श्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौं, २४ साउन । नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा अधिकारीहरू समन्वय र संवाद प्रभावकारी बनाउन सहमत भएका छन् । दुई देशका उच्च सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित ‘कोअर्डिनेसन समिति’ को नयाँदिल्लीमा सुरु तेस्रो बैठकमा केन्द्रदेखि
काठमाडौं, २४ साउन । जनकपुर–जयनगरमा सञ्चालन गरिने रेलको सफल परीक्षण गरिएको छ । विगत ४ वर्षदेखि पूर्णरुपमा बन्द रहेको देशको एकमात्र रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले भारतीय पक्षले परीक्षण गरेको हो ।
वाणिज्य सङ्घको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न
पर्सा, २३ साउन । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २३ बुँदे सुझावसहितको घोषणापत्र जारी गर्दै वीरगञ्जमा आयोजित जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ ।
नेपालमै पहिलोपटक प्राकृतिक चिकित्सा र योगको अध्ययन
नवलपरासी, २३ साउन । पूर्वी नवलपरासीको रजहरमा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले प्राकृतिक चिकित्सा र योग विषयमा अध्ययन÷अध्यापन गराउने भएको छ ।
हिन्दू परिषद्को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक सम्पन्न, जिम्मेवारी बाँडफाँड
वीरगंज, २३ साउन । हिन्दू परिसद नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय अध्यक्ष संतोष पटेलको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ ।
घर–घरमा गएर प्रमाणपत्र र नक्सा पास गर्ने अभियान सुरु
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, २३ साउन । तिलोत्तमा नगरपालिकाले बिगतमा घर बनाएका तर नक्सा पास नगरेका वा घर बनाएर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नलिएका सर्वसाधारणलाई घरमा नै गएर प्रमाणपत्र दिन घर नक्सा पास गर्ने अभियान सुरु गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल भारत प्रस्थान
काठमाडौं, २२ साउन । भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने ‘थर्ड कोअर्डीनेशन मिटिङ’मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल मंगलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
३९ जनाद्वारा रक्तदान
रमेश चन्द्र कुमाल, नेपालगञ्ज, २२ साउन । नेपालगन्जबाट प्रकाशित हुंदै आएको जनमत अद्र्धसाप्ताहिक पत्रिकाले आयोजनामा र आर्शीवाद पेन्ट्स प्रा. लि., नेपालगन्जको सहकार्यमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ३ जना महिला सहित ३९ जनाले रक्तदान गरेका छन् ।
कर्जन्हा नगरपालिकाको केन्द्र विवाद सतहमा
राम नारायण पंडित, सिरहा, २२ साउन । कर्जन्हा नगरपालिकाको केन्द्र कर्जन्हा बजारमा राख्नुपर्ने भन्दै मेयर गंगा पासवानलाई नागरिक समाजले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समाजका संयोजक कुशेश्वर महतोको नेतृत्वमा पुगेका टोलीले बिभिन्न ५ बुँदे माँग राख्दै मेयर पासमानलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
विद्युत प्राधिकरण मिर्चैयाद्वारा ५९ करोडभन्दा बढी महशुल असुली
सिरहा, २२ साउन । केही वर्षअघिसम्म अत्यधिक विद्युत् चुहावट हुँदै आएको सिरहाको मिर्चैया क्षेत्रमा यसवर्ष चुहावट शून्य दशमलव ४५ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र मिर्चैयाका प्रमुख शिवराम यादवका
काठमाडौं, २१ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आणविक हतियार विश्वकै लागि घातक हुने बताएका छन् । ७३औं हिरोसिमा स्मृति दिवशको अवशरमा नेपाल अफ्रो एशियाली जनएकता संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका छन् ।
राजविराजमा न्यायिक इजलास भवन उद्घाटन
राजविराज, २१ साउन । राजविराज नगरपालिकाले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले न्यायिक इजलास भवन निर्माण गरेको छ । नवनिर्मित भवनको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले उद्घाटन गरे ।
बीस मुलुकका उच्च सैनिकको अभ्यास शुरु
काठमाडौँ, २१ साउन । विपद्को समयमा मानवीय उद्धारमा खटिँदा बहुराष्ट्रिय सेनाबीच सम्पर्क कायम गरी सूचना प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले २० मुलुकका उच्च सैनिकको अभ्यास आजदेखि यहाँ शुरु भएको छ ।
पर्रोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धाममा भीड बढ्दै
बुटवल, २१ साउन । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१ स्थित पर्रोहामा पर्रोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धाम (श्रावणी मेला) मा आज भक्तजनको घुइँचो लागेको छ ।
४० किलो अवैध सुपारीसहित एक जना पक्राउ
इनरुवा, २१ साउन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले ४० किलो अवैध सुपारीसहित एक जनालाई आइतबार पक्राउ गरेको छ ।
श्रीमद्भागवत गीता र सरल गीता विमोचन
काठमाडौं, २१ साउन । घरघरमा श्रीमद्भागवत गीता पु-याउने अभियानको घोषणा गरिएको छ । गीता प्रेस बिक्री केन्द्रले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको श्रीमद्भागवत गीता र सरल गीता विमोचन समारोहमा घरघरमा गीता
बारा : मोतीसर चोक–चन्द्र माविसम्मको बाटो ‘प्रचण्डपथ’ नामकरण
कलैया, २० साउन । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने र नेकपाको एकता भाँड्नका लागि देशीविदेशी शक्ति लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालगन्जमा जलोद्यान (वाटरपार्क) निर्माण गरिँदै
नेपालगञ्ज, २० साउन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ धम्बोझीमा जलोद्यान(वाटरपार्क) निर्माणको काम शुरु भएको छ । रु ७० करोडको लागतमा जलोद्यान निर्माण थालिएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पोखरा र लुम्बनीको भ्रमण गर्ने
काठमाडौं, २० साउन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चौथो पटक नेपाल आउने भएका छन् । भदौ १४ र १५ गते हुने चौँथो विमस्टेक बैठकमा भाग लिन नेपाल आउन लागेका प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा दुई दिन रहने छन् ।
उदयपुरको सगरमाथा औषधालयको सेवा बन्द
उदयपुर, २० साउन । जिल्ला सदरमुकाम गाईघाटस्थित बोक्सेमा सञ्चालन हुँदै आएको सगरमाथा क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो सगरमाथा आयुर्वेदिक औषधालयले दिँदै आएको सेवा अर्थाभावका कारण बन्द भएको छ ।
बाँके : छोटो समयमा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान बनाउन सफल गाभर भ्याली
बाँके, २० साउन । नेपालगञ्ज–४ का गोविन्ददेव अधिकारीलाई महिनामा कम्तिमा एक पटक बाँकेको बैजनाथ–१ मा रहेको गाभर भ्याली पुग्नैपर्छ, कहिले साथीभाइसँग त कहिले परिवारसँग ।
नेपाल भारत व्यापार समस्यालाई तत्काल समाधान गरिन्छ : प्रम ओली
काठमाडौं, १९ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत व्यापारमा भएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने बताएका छन् । हालसम देखिएका व्यापारका असमझदारीहरु हटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिबको नेतृत्वमा एक टोलीलाई भारतीय समकक्षीसँग
राष्ट्रिय विद्यार्थी संघको जनकपुर नगर कमिटी गठन
जनकपुरधाम, १९ साउन । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले प्रदेशको २ को राजधानी जनकपुरधाममा जनकपुर नगर कमिटि गठन गरिएको छ ।
प्रदेश १ लाई मुलुककै सक्षम प्रदेश बनाइने
झापा, १९ साउन । प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले यो प्रदेशलाई मुलुककै सक्षम प्रदेश बनाइने बताएका छन् ।
पहिचानबिनाको संघीयता पित्तललाई सुन ठानेजस्तै हो : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
भक्तपुर, १९ साउन । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल मध्यपुर थिमि नगर भेला अध्यक्ष सरोज घःजुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । नगर अध्यक्ष सरोज घःजुको अध्यक्षतामा भएको उक्त भेलामा प्रमुख अतिथि तथा पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नेवाः प्रदेशमा पार्टी निर्माण र चुनौतिबारे बोल्दै प्रत्येक कार्यकर्ताहरू आन्दोलनको